NY MPAMPAKATRA SY NY AMPIAKARINA (ANY AN-DANITRA) – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 août 23, 2013 Laisser un commentaire sur NY MPAMPAKATRA SY NY AMPIAKARINA (ANY AN-DANITRA)
“Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny” Apokalypsy 21: 2
Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dickens nampitondrainy ny lohateny hoe Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoakely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny mariaziny. Tsy tafarina mihitsy tamin’izany zava-nanjo azy izany izy ary mbola nitondra ny akanjo mariaziny, ny voaliny, ny kirarony ary ny voninkazo mariazy nandritra ny fotoana lava.
Ampombain’ny Baiboly amin’ny fanambadiana sy ny fiainam-pianakaviana indraindray ny fitiavan’i Jesosy kristy, Ilay Mpampakatra. Ny Ampakarina, dia ny Fiangonana. Ao amin’ny fanoharana momba ny virjina folo nataon’i Jesosy ohatra, dia naharitra ela ny fahatongavan’ny mpampakatra. Inona no nitranga raha tsy tonga niseho mihitsy ny mpampakatra? Toa inona ny hahalehiben’ny fahadisoam-panantenan’ny ampakarina! Eritrereto kely ny fijalian’ny ampakarina. Fa ny mpampakatra, izay tsy Iza fa kristy, dia tsy nampijaly ny Fiangonany tahaka izay nataon’ny fofombadin-dRamatoa kely Havisham taminy. Fa tonga ny Mesia, araka izay nambaran’ny mpaminany, dia tahin’Andriamanitra ny Fiangonany, amin’ny fanolorana “hamama ho solon’ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon’ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon’ny fanahy reradreraka”(Isaia 61: 3). Amin’ny farany ao amin’ny bokiny dia ambaran’ny mpaminany fa “tahaka ny fifalian’ny mpampakatra amin’ny ampakariny no hifalian’Andriamanitra aminao” (Isaia 62: 5). Tia ny Ampakariny Kristy, dia ny Fiangonana izany, ary maty ho azy Izy. Ankehitriny, isika izay mambra ny Fiangonany, dia vita fihavanana amin’Andriamanitra.
Nefa tsy izay no fiafaran’ny tantara. Mbola ho avy indray amim-boninahitra ny Mpampakatra (avy any an-danitra). Ny apostoly Jaona dia nahazo fahitàna feno famantarana momba ny fikambanan’i Kristy amin’ny Fiangonany. Aseho sary toy ny avy hihaona Aminy isika, “toy ny ampakarina mihaingo mahafinaritra hihaona amin’ny vadiny”. Ny akanjo dia ny fahamarinan’i Kristy izay itafiantsika amin’ny alàlan’ny finoana Azy, dia ny Mpamonjy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!
tél: 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
Publié parfilazantsaramada août 23, 2013 Publié dansUncategorized